Hordhaca: Heegan vs A Proline FC- kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhici doona garoonka Kigali Stedium %
Hordhaca: Heegan vs A Proline FC- kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhici doona garoonka Kigali Stedium
By Badrudiin Mohamed	 Last updated Jul 11, 2019
Kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan Sports Club ayaa kulankeedii 3-aad ee tartanka bariga iyo bartamaha Afrika 2019 ee Group C la balansan xidigaha Apr FC.
Xidigaha Heegan oo ka socda dalkeena ayaa laga filayay natiijo aad u wanaagsan,balse ciyaartooyda qaar ayaa sheegay in goolashii laga dhaliyay ay ahaayeen kuwa iyaga ay ku qaldanaayeen,balse raali gelin ay ka bixinayaan
06-July 2019-Heegan ayaa ciyaartii 1-aad ee tartanka kooxaha bariga iyo bartamaha Afrika la dheelay xidigaha Green Eagles ee ka dhisan Zambia waxaana kulankaas 2-o ku badiyay ciyaartooyda kooxda Green Eagles .
Goolasha naga dhashay kulankaa waxa ay aheyd kuwa daciif ah,balse xaga rabi waxaa inooga qornaa in aan anaga guul daraysano kubbadda cagta waa in aad ka filataa wax kasta” waxaa sidaas Ku waramay Mustapha Nakuja.
08-July 2019-Xidigaha Heegan waxa ay kulankoodii 2-aad ee Cecafa la ciyaareen xidigaha Proline FC oo ay kuwada jireen Group C ka dhisan dalka Uganda waxaa kulankaas Heegan natiijo 2-0 ay guul daro kala kulantay naadiga Proline FC.
Ma aanan filanaynin natiijada oo kale dadka oo dhan ayaa inoo mahad celiyay kubbaddii qurxooneed ee aan soo bandhigay,iyagoo u riyaaqay,balse mararka qaar adaga oo wanaagsan ayaa la kulmaysaa natiijo xumo” waxaa sidaas u sheegay laacibka Hegan Abdirizaak Ali Mohamed.
Naadiga Heegan ayaa kulankeeda u danbeeya ee tartanka kooxaha bariga iyo bartamaha Afrika 2019 la balansan kooxda ka dhisan dalka Rwanda ee Apr.
Kooxaha:Heegan VS Proline FC